'Sacred Games'का कारण यूएईमा एक भारतीयलाई तनाव - Samaya Sandarva
बुधबार, भाद्र ४, २०७६ ०९:३३ - समय सन्दर्भ
दुबई: नेट्फ्लिक्सको चर्चित भारतीय वेब सिरिज ‘Sacred Games’को दोस्रो संस्करणको एउटा दृश्यमा एक भारतीयको मोबाइल नम्बर देखाउनाले उक्त व्यक्तीको निंद हराम भएको छ । बिभिन्न देशबाट अवांछित फोन आएर उनलाई तनाव भएको छ ।
शारजहाको एक तेल कम्पनीमा काम गर्ने केरला निवासी ३७ वर्षिय कुन्हाब्दुल्ला सीएमको फोन नम्बर १५ अगस्टमा रिलिज गरिएको ‘Sacred Games’को दोस्रो संस्करणको पहिलो एपिसोडमा काल्पनिक गेङस्टर सुलेमान ईसाको नम्बरको रूपमा ‘फ्ल्यास’ भएको थियो।
कुन्हाब्दुल्लाले गल्फ न्यूज सँग कुरा गर्दै भने -” भारत, पाकिस्तान, नेपाल, यूएई लगायत बिभिन्न देशहरुबाट पछील्ला तीनदिन देखी मलाई लगातार कल अै रहेको छ। था छैन के भैरहेको छ।”
उनले भने -” फोनको घण्टी बज्नासाथ मलाई तनाव हुन्छ। म यो नम्बर रद्द गर्न चाहन्छु। म यो समस्याबाट छुट्कारा पाउन चाहन्छु। ” कुन्हाब्दुल्लाले अहिले सम्म न नेट्फ्लिक्स न यो वेब सिरिज बारे सुनेका छन । उनले भने -” यो सेक्रेड गेम्स के हो? भिडियो गेम्स हो ? म बिहान ८ बजे उठेर काममा जान्छु, साझ ७ बजे फर्कन्छु। मलाई यस्तो कुराको लागि समय नै छैन। आजै मलाई ३० बढी कल आइसक्यो । यसले मेरो फोनको बेट्री चाडै सकिन्छ। पछील्लो एक घण्टा मा ईसा हो ? भन्दै पाँच कल आइसक्यो । को हो यो ईसा भनेको ? मेरो ऊ सँग केही लिनु दिनु छैन।”
कुन्हाब्दुल्लाको नम्बर एक भारतीय एजेण्टले, गणेश गाइतोण्डे (नवाजुद्दिन सिद्दीकी) लाई एक खूंखार गेङस्टर ईसाको फोन नम्बर वाला पर्ची दिएको दृश्यमा देखाइएको छ । नेट्फ्लिक्सले गल्फ न्यूजमा गत सोमबार वक्तब्य जारी गर्दै भन्यो-” कसैलाई पर्न गएको असुबिधा प्रती हामीलाई खेद छ। यसबारे थाहा पाउने बित्तिकै हामीले समस्याको समाधान गरेका छौ । हामीले सब टाइटलबाट उक्त फोन नम्बर हटाइदिएका छौ ।”